Natiijo la’aanta waxay muujinaysaa khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo NATO | Arrimaha Bulshada
Home News Natiijo la’aanta waxay muujinaysaa khilaafka u dhexeeya Ruushka iyo NATO
Bulsha:- Wadahadallo socday toddobaad ka dib, wada-hadalladii u dhexeeyay Ruushka, NATO iyo Mareykanka ee looga hadlayay xasaradaha ka taagan Ukraine ayaan lagu guuleysan in laga gudbo kala aragti duwanaanshiyaha.
Maraykanka iyo reer Yurub ayaa cambaareeyay soo gelinta ciidamada Ruushka ee soohdinta, waxaana Ruushku uu sii wadaa diidmada uu doonayo inuu ku weeraro deriskiisa.
Wada hadal ayaa dhacay, balse wax heshiis ah lagama gaarin. Kremlin-ka, ayaa dhankeeda, ugu yeertay wadahadallada “midho-la’aan” Khamiista, halka dhowr khilaafaadyo ay si madax-adayg ah u jiraan.
Waa mowduuca ku xeeran kartuunistayaasha Kartoonada Nabada ay abaabuleen todobaadkan, ka dib todobaad aad u adag oo diblumaasiyadeed ay ka yeesheen xiisada Ukraine.
Gabagabo: Kala duwanaanshuhu wuu jiraa, xiisaduhuna way sii jiraan.
Maraykanka iyo Yurubiyaanka ayaa cambaareeyay soo gelinta ciidamada Ruushka ee xadka Ukraine, waxayna ka cabsi qabaan isku dhacyo hubeysan. Moscow, dhankeeda, ayaa diiday wax ujeedo ah oo lagu weerarayo Ukraine, laakiin waxay difaacday waxa Ruushku u arko inay yihiin “aagga saameynta” waxayna diiday dhammaan isdhexgalka Ukraine ee NATO.
Qoraaga sawirka, Faransiiska Yas, wuxuu xiisaynayaa inuu abuuro sawir-gacmeedyo iyo sawirro saxaafadeed, kuwaas oo uu u arko habka ugu wanaagsan ee lagu kobcin karo dareenkiisa faneed iyo inuu si xor ah uga hadlo mawduucyada muhiimka u ah isaga.
Ballanqaadkan faneed wuxuu ka yimid baahida Ya si uu ula wadaago shaqadiisa daawadayaasha mararka qaarkood ka fog farshaxankiisa (dhallinyarada, muhaajiriinta, dadka xabsiga ku jira, iwm.).
Kartuunada Nabadda waa shabakad caalami ah oo sawir-gacmeedyo ah kuwaas oo ay ka go’an tahay horumarinta xorriyadda hadalka, xuquuqda aadanaha iyo ixtiraamka wadaagga ah ee ka dhexeeya dadka ka soo jeeda dhaqamo iyo caqiidooyin kala duwan iyada oo loo marayo caalamiga ah ee war-saxaafadeedyada.